Calanka Birta Calanka Lapel Pin Badge Deji Dheemanka Trophy dhinta Billad Dahab ah oo Dahab ah
Cabir: qiyaastii 7cm
Gadaal: ciid-qarxisay + 1 boosto taageero
Farshaxanimada: dhaldhalaalka jilicsan, laba qaybood oo go'an
1. Caado Pin Badges: pin dhaldhalaalka adag, pin dhaldhalaalka jilicsan, dhaldhalaalka jilicsan + pin epoxy, dhalaalaya dhaldhalaalka dhalaalaya, dhalaalaya pin pinka, iwm.
Anaga oo ku dhegan fikirka ah "Abuuritaanka alaab tayo sare leh iyo in aan saaxiibo fiican la yeelano dadka maanta adduunka oo dhan ka imanaya", waxaan si joogto ah u dejinaynaa daneeyayaasha wax iibsanaya si aan ugu bilowno Bixinta OEM China Brass Tayada ugu Sareysa iyo Billada Maamuusta Dahabka ee Dahabiga ah. waxaa loola jeedaa sida adag ee aan shaqada u qabanay, inta badan waxaan safka hore uga jirnay wax soo saarka tikniyoolajiyadda nadiifka ah hal-abuurnimada. Waxaan ahayn lamaane bey'ada u saaxiib ah oo aad isku halleyn karto. Nala soo xiriir maanta wixii faahfaahin dheeraad ah!
Bixinta OEM China Medallion iyo Honor medallion qiimaha, Tayada wax soo saarkeenu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee walaaca laga qabo waxaana loo soo saarey inay la kulanto heerarka macaamiisha. “Adeegyada macaamiisha iyo xiriirka” waa qeyb kale oo muhiim ah oo aan fahamsanahay xiriirka wanaagsan iyo xiriirka aan la leenahay macaamiisheenna waa awoodda ugu muhiimsan ee lagu socodsiinayo ganacsi muddo dheer ah.
Hadafkeenu waa inuu noqdaa inuu noqdo soo-saare casri ah oo ah aaladaha casriga ah iyo aaladaha isgaarsiinta iyadoo la siinayo qaab dhismeedka qiimaha lagu daray, soosaarida heer caalami ah, iyo awoodaha adeeg ee 8 Sano dhoofiye Shiinaha Farshaxanka Farshaxanka Dahabka ah ee Crystal Trophy Music Dance Caaga / Wood Trophies Base, Waxaan diyaar u nahay inaan ku siino qiimaha ugu hooseeya ee iibinta inta lagu jiro suuqa, tayada ugu sareysa iyo adeegga iibka oo aad uwanaagsan.
8 Sano Dhoofiye China Custom Trophy iyo Sport Trophy qiimaha, Iyadoo in kabadan 9 sano oo khibrad ah iyo koox xirfad leh, hada waxaan u dhoofinay alaabteena dalal iyo gobolo badan oo aduunka ah. Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha, ururada ganacsiga iyo asxaabta ka socota dhamaan qeybaha kala duwan ee adduunka in ay nala soo xiriiraan oo ay iskaashadaan si ay uga wada faa'iideystaan.
Hore: Laba shey oo iskujira Naqshad Dahab Dahab Lapel Pin Marathon Bilad Badge Deji
Xiga: Billadaha Kubadda Koleyga ee Casriga ah
Musmaarrada Custom dhaldhalaalka
Musmaarradii Lapel Custom
Custom Design Factory sameeyey Running Badge Gold P ...